ဘဏ်အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ စပါးနဲ့ပွဲ ပြန်ပါလာမယ့် ရိုနယ်ဒို ၊ စည်းမျဉ်းပြောင်းလိုက်တဲ့ ရွှေဘောလုံးဆု တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဘဏ်အကောင့်ပိတ်ခံရတဲ့ ချဲလ်ဆီး ၊ စပါးနဲ့ပွဲ ပြန်ပါလာမယ့် ရိုနယ်ဒို ၊ စည်းမျဉ်းပြောင်းလိုက်တဲ့ ရွှေဘောလုံးဆု တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဒီမီတာ ဘဘာတော့ဗ် က အသင်းဟောင်း ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ မှာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတဲ့ နောက်ခံလူ အန်တိုနီ ရူဒီဂါ ကို ဝင်ရောက် ကမ်းလှမ်းကြည့်သင့်တယ်လို့ အကြံပြု တိုက်တွန်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရူဒီဂါ ဟာ နွေရာသီမှာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ်ပြည့်မှာ ဖြစ်ပြီး PSG အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်း ရဲ့ ဘာကလေ ဘဏ်အကောင့် နဲ့ ခရတ်ဒစ်ကတ် အသုံးပြုခွင့် တွေကို ပိတ်ပင် လိုက်တယ်လို့ ယမန်နေ့ ညက သတင်း ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ချဲလ်ဆီးဟာ အသင်းအတွက် ကုန်ကျမှုတွေကို ဘဏ်စနစ် အသုံးပြုကာ ပေးချေ နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ဂျာစီ စပွန်ဆာ Three က အသင်းနဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ပေမယ့် Nike နဲ့ Trivago တို့ကတော့ အသင်းနဲ့ ဆက်လက် လက်တွဲ သွားဦးမယ်လို့ အသိပေး ကြေညာ သွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဗြိတိန် ဟာ ချဲလ်ဆီး သူဌေး အေဘရာမိုဗစ်ချ် ကို မေလ ၃၁ နောက်ဆုံးထားပြီး အသင်းကို ရောင်းချဖို့ ရက်ချိန်း သတ်မှတ် ပေးထားတယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ နွေရာသီမှာ ဘာစီလိုနာ နဲ့ စာချုပ်ပြည့်မယ့် လူငယ်လေး ရိုနယ် အာရူဟို ကို အခြား အသင်းတွေ ထက် ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အလားအလာ ပိုများ နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ နဲ့ အေစီမီလန် ကွင်းလယ် ကစားသမားဟောင်းကြီး ကလဲရင့် ဆေးဒေါ့ဖ် က အမ်ဘာပေ ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် မှာ ဘန်ဇီးမား ရဲ့ နေရာကို ဝင်ယူဖို့ အတွက် အများကြီး သင်ယူရဦးမယ်လို့ ပြောဆို ခဲ့ပြီး PSG ကို အနိုင်ရတဲ့ ပွဲမှာ ဘန်ဇီးမား နောက်ကို ဆင်းပြီး ဘောလုံးယူ ကစားပေးသလိုမျိုး ဘာပေ မကစားတတ် သေးဘူးလို့ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ ဒီကနေ့ ညမှာ ကစားမယ့် တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နဲ့ ပွဲ ကို ပါဝင် ကစားဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေ ပါပြီလို့ နည်းပြ ရန်းနစ် က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီရဲ့ ဂန္ထဝင် ဂိုးသမား ၂ ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဒီနို ဇော့ဖ် နဲ့ ဘူဖွန် တို့ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် ကို ရှုံးနိမ့်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရမှုမှာ အဓိက တရားခံ အဖြစ် ဝေခန် ခံခဲ့ရတဲ့ အီတလီ ဂိုးသမား ဒွန်နာရမ်မာ ကို အားပေး စကားတွေ ပြောဆို သွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ ထိပ်သီး ယူဗင်တပ် ဟာ လာမယ့် ရာသီမှာ ဒွန်နာရမ်မာ ကို အီတလီကို ပြန်ခေါ်ယူဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ဟာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကနေ အငှားနဲ့ ခေါ်ယူ ထားတဲ့ တိုက်စစ်မှူး မိုရာတာ ကို ယူရို ၁၅ သန်း နဲ့ အပြီးသတ် ဝယ်ယူဖို့ ကမ်းလှမ်း ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ကွင်းလယ်လူ ဘရူနို ဂွီမာရက်စ် က သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ မတိုင်ခင်က အာဆင်နယ် အပါအဝင် အသင်းအချို့ နဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ပေမယ့် နယူးကာဆယ် ကို ရွေးချယ် ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရွှေဘောလုံးဆုကို ကြီးမှူးကျင်းပ ပေးအပ် နေတဲ့ France Football ဟာ လာမယ့် ဘောလုံး ရာသီက စပြီး ဆုအတွက် အမှတ်ပေးဖို့ စဉ်းစား တွက်ချက်တဲ့ ကာလ ကို ပုံမှန် ပြက္ခဒိန်နှစ် ( ဇန်နဝါရီ မှ ဒီဇင်ဘာ ) အစား ဘောလုံး ပြက္ခဒိန် အတိုင်း ( ဇူလိုင်လ မှ သြဂုတ်လ ) ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ ကလပ် အက်စ်ပန်ညို အသင်းကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တရုတ် အခြေစိုက် ရာစတား အုပ်စု ဟာ အသင်းကို ပြန်လည် ရောင်းချ သွားဖို့ စီစဉ် နေပြီလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်လူဟောင်း ရေးပါလာ က မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် သာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကနေ ထွက်ခွာ ဖြစ်ပါက အာဆင်နယ် အနေနဲ့ လက်ဦးမှု ရယူကာ ခေါ်ယူ သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးလေး မာတင်နယ်လီ ဟာ မကြာခင် ကစားမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲတွေ အတွက် ဘရာဇီး အသင်းရဲ့ လူစာရင်းမှာ ရွေးချယ် ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါဟာ မာတင်နယ်လီ အတွက် စီနီယာ လက်ရွေးစင် အသင်းမှာ ပထမဆုံး ရွေးချယ် ခံခဲ့ရတာပါ ။
လီဗာပူး နောက်ခံလူ ဂျိုရယ် မာတစ် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လ အတွက် တလတာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကင်မရွန်းသားတွေ ထဲမှာ ဒီဆုကို ပထမဆုံး ရရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်လာ စေခဲ့ ပါတယ် ။
ဖေဖော်ဝါရီ အတွက် တလတာ အကောင်းဆုံး နည်းပြဆု ကိုတော့ နယူးကာဆယ် နည်းပြ အက်ဒီဟောင်း က ရရှိခဲ့ပြီး တလတာအကောင်းဆုံး သွင်းဂိုးဆု ကိုတော့ ပဲလေ့စ် တောင်ပံ ကစားသမား ဇာဟာ က နောဝှစ်ချ် နဲ့ ပွဲက သွင်းဂိုး နဲ့ ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မိုဟာမက် ဆာလာ ဟာ လီဗာပူး အသင်းက ကမ်းလှမ်းတဲ့ စာချုပ်ကို ငြင်းပယ် ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အသင်းမှာ ဆက်မနေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ဆာလာ ဟာ လီဗာပူး နဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေကာ ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ စာချုပ်ကို အလိုရှိနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article Paul Merson လာပါပြီ . . . အဆင့် ၄ လုပွဲအတွက် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေ ပါဝင်နေတဲ့ EPL Week 29 အတွက်ခန့်မှန်းချက်များ
Next Article လက်စတာ စီးတီး နဲ့ ပွဲမတိုင်မှီ စမစ်ရို ၊ တိုမီယာစုတို့ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု အခြေအနေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားလိုက်တဲ့ အာတီတာ